dhacdooyinka – Page 7 – KHAATUMO NEWS
dhacdooyinka (Page 7)
Khaatumo News(Garoowe) Deeganada Puntland waxaa bilihii udambeeyay ka dhacay kufdiyo iyo dilal foolxun, oo lagula kacay hablo isugu jira da’yar oo qaarkood sagaal jir yihiin iyo kuwo xaamilooyin ah oo la kufsadey lana dilay. Halkan Ka daawo Muqaal Falalka kufsiga ayaa kusii badanaya deeganada puntland mana jirto ilaa haatan cidContinue Reading
Deg-deg Daawo:- Abid Qaraxii ugu waynaa oo ciidamada Soomaaliya ay ka Qabteen Shabeelaha hoose Xili loo wadey Muqdisho
Ciidanka Xoog Dalka ayaa gacanta ku dhigay Gaari Booyad ah oo ay Saarnaayeen Qaraxyo oo ay ka carareen Maleeshiyaad ka tirsan Argagixisada Al-shabab kadib markii ay Ciidanka xoreeyeen degaanka Sabiid ee Gobolka Shabellada Hoose. HALKAN KA DAAWO Argagixisada ayaa damacsaneyd iney fuliyaan mid ka mid ah Weeraradii ugu qasaaraha badnaaContinue Reading
Cajiib Daawo Video:- Lamaane Cadaan ah oo Dhigtey Aroos Soomaali
Baraha bulshada Soomaalida ayaa waxa qabsaday hadal hayna arooskan iyo muuqaaladdooda oo aad u qurux badan, dharka hidaha iyo dhaqanaka ayey lammaanahan ku labisteen arrintas oo ka yaabisay dad badan.l HALKAN KA DAAWO VIDEO lammaane u dhashay dalka Canada ayaa xafladda arooskooda ku dhigay magaalada Hargeysa, waxaana baraha ay bulshadaContinue Reading
Taariikhda jaceylka soomaalida marka laga hadlayo waxaa inta badan la soo qaataa Cilmi boodhari oo lagu xasuusto inuu ahaa aabihii soomaaliyeed ee dareenkiisa jaceylka muunadeeyey kuna run sheegay,goobtii u danbeysay ee uu ku geer-yooday Boodhari ee Batalaale ayaa ah goob loo dalixiis tago xilliyada dareenka jaceylku jiro, Halkan Ka Daawo VideoContinue Reading
Xili weli cirka isku sii shareerayaan xiisadihii dagaal ee u dhaxeeyey Puntland iyo Somaliland isla markaasna qaybo kamid ah gobolka Sanaag uu ay hada socdaan dhaq dhaqaaqyo ciidan ayaa waxaa dagaalkaasi kusii baray kana hadlay hogaamiyaha Jabhadda xoreynta iyo dulmi diidka Somaliland ee Korneyl Caarre. HALKAN KA DAAWO VIDEO KorneylContinue Reading
DAAWO:Xildhibaano oo loo diiday madaxtooyada P/land & Madaxweyne Denni oo waji culus lasoo baxay
Siyaasi Daahir C/qaadir Muuse (Daahir Ciiro) oo hore xildhibaan uga soo noqday dowladdii kumeel gaadhka ahayd ee Soomaaliya ayaa eedayn xoogan u jeediyey madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Denni, waxaana uu sheegay siyaasigu in af duub uu kuwado madaxweynuhu talada iyo hanaanka dowladdnimo ee Puntland. Mar uu saaka uContinue Reading
DHAGAYSO:Cuqaasha Buuhoodle oo war lagu farxay kasoo saaray colaadii Beelaha Harag & Hayaag
Xili muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen qaybo kamid ah gobolka Cayn shaqaaqooyin iyo dagaalo u dhaxeeya beelo wada dega gobolkaasi ayaa waxaa haatan ka socda deegaanada gobolka Cayn qaarkood waan waan nabadeed oo ku aadan sidii xal looga gaadhi lahaa shaqaaqooyinkaasi. Caaqil Maxud Maxed Cabdi Aw Yuusuf oo kamidContinue Reading
Deg deg Daawo Video:- Cajiib ” Wax ka ogow Qisada Nin sheegay in uu Waraabe Noqday “
Xasan axmed cabdi oo kunool magaalada hargaysa ayaa sheegay in isaga iyo sadex saaxiibadiiya ay noqdeen waraabayaal isla markaan ay cuneen xoolo nool. Halkan ka daawo video cajiibaContinue Reading